eHimalayatimes | अन्तर्वार्ता | कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी नै भिषाको व्यापार गर्छन्
22nd June | 2018 | Friday | 5:53:06 AM
कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी नै भिषाको व्यापार गर्छन्
POSTED ON : Tuesday, 29 August, 2017 (4:54:45 PM)
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भइसकेको दि रिभर ओभरसिजका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रघु पुरीले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएर व्यवसायले अर्थमा ठूलो योगदान पु¥याएकोले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा सरकारको भन्दा ठुलो योगदान म्यानपावर व्यवसायीहरु कै छ । विदेशबाट ५० देखि ६० प्रतिशत फ्री भिसा र फ्री टिकटकै डिमान्ड आउने गरेको बताउने अध्यक्ष पुरीसँग हाम्रा सम्वाददाता रमेश भारतीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय देशको मेरुदण्ड हो । यो मेरुदण्डको संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीको भएकाले हामी जहिले पनि व्यवसायप्रति निष्ठावान छौं । व्यवसाय व्यवसायीको आत्मा भएकाले पनि यो क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको हो । त्यसो त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय यस वर्षदेखि लयमा फर्किएको छ । विगत केही वर्षदेखि यस क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापरेका कारण विदेशिने कामदारको संख्यामा कमी आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विदेशिने नेपाली कामदार संख्यामा वृद्धि भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक पक्ष ठानेका छौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई स्वतन्त्ररूपमा चलाउन दिनुपर्छ । सरकारले स्वच्छरूपमा व्यवसाय चलाउने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने व्यवसायले नै यसलाई सहजरुपमा अघि बढाउन सक्छन् ।
सरकारले दुई वर्षअघि लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार पठाउँदै हुनुहुन्छ ?
सरकारले लोकप्रियता कमाउन ल्याएको यो नारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि स्वीकार्य छैन । विदेशबाट रोजगारदाता कम्पनीले दिने भिसा फ्री नै हो । धेरैजसो देशले यो सुविधा दिइरहेकै छन् । फ्री भिसा र टिकटको खोजी गरेर कामदार पठाउने पक्षमा व्यवसायी पनि छन् । तर, यो विषयमा सरकार पनि जानकार त हुनुप¥यो । सरकारले हचुवामा जबरजस्ती फ्री भिसा र टिकटमा कामदार पठाउ भन्दा रोजगार व्यवसाय कस्तो अवस्थामा पुग्ला भनेर सोच्नुपर्ने हो । फ्री भिसा र टिकटका नाममा यो व्यवसायलाई सिध्याउने खेलमा स्वयम राज्य नै लागिपरेको छ । रोजगारदाता देशबाट आउने डिमाण्डमध्ये करिब ५० देखि ६० प्रतिशत फ्री भिसा र टिकट नै हुन्छ तर राज्यले कस्ता रोजगारदाता कम्पनीले नेपाललाई शून्यदरको सुविधा दिन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । सरकारले रोजगारदाता देशमा गएर अध्ययन नै नगरी फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषय उठाएर नेपालको श्रम बजारलाई अस्तव्यस्त पार्न खोजेको छ ।
भनेपछि रोजगारदाता कम्पनीले नै नेपाली कामदारलाई फ्री भिसा र टिकट दिँदा रहेछन् त ?
फ्री भिसा र फ्री टिकट नआउने होइन । तर, भिसा र टिकट फ्री दिएपनि उक्त सेवामा व्यवसायीले कामदार पठाउन सक्दैनन् । डिमाण्ड दिने रोजगारदाताले डिमान्ड खोज्न जाँदा व्यवसायीसँग नेपालबाट कामदार पठाएको ६ महिनाभित्रमा काम गर्न नसकि अथवा अन्य कारणले हामीले पठाएका कामदार फर्किए भने फर्किएको व्यक्तिको क्षतिपूर्ति व्यवसायीले कम्पनी र कामदारलाई तिर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवसायी यस्तो परिबन्धमा परेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यही भएर फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णयमा सरकारले तत्काल पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू हुन्न त ?
नेपालको सन्र्दभमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा तत्काल सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ नत्र भने अहिले जे जति माग विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले दिँदै आएका छन् । त्यो माग घटाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सबै देशमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय स्वीकार्य हुँदैन । यस विषयमा मलेसिया सरकारले सुरुदेखि नै असमति जनाउँदै आएको छ । अरु देश पनि तत्काल फ्री भिसा र फ्री टिकटमै कामदार झिकाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।
व्यवसायी बाहृय श्रम बजारमात्र हेर्छन्, स्वदेशकै श्रम बजारतिर चाहिँ किन ध्यान नदिएको ?
विदेशमा जस्तै नेपालको अन्तरिक श्रम बजारमा लाखांै कामदारको आवश्यकता छ । हामीले पनि नेपालको अन्तरिक श्रम बजारको खोजी गरेर स्वदेशमै रोजगारीकोे व्यवस्था गर्न सक्छांै । तर, यस विषयमा राज्यले पनि चासो लिनुपर्छ । अहिले नेपालको आन्तरिक बजारमा औसतमा वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी कामदारको माग छ । पुनर्निर्माण, सडक, विद्युत्, कृषि र अन्य क्षेत्रमा उच्च कामदारका माग भइरहेको हुन्छ तर स्वदेशमै रोजगारी पाउँदा पनि नेपाली युवा काम गर्न विदेश नै जान रुचाउँछन् । किनभने हाम्रो देशमा रोजगारको सुरक्षा, लगानीको वातावारण र उचित परिश्रमिक पाउने अवस्था छैन । सरकारले वातावरण बनाइदियो भने हामी स्वदेशमै वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं तर सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएको छैन । सरकार स्वदेशमै अवसरको खोजी नगरी व्यवसायीको पछिमात्र दौडिरहेको मात्र छ ।
व्यवसायीले कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा धेरै रकम असुल्ने गरेको आरोप नि ?
धेरै रकम भनेको कति हो ? राज्यलाई मेरो प्रश्न छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगार व्यवसायीले ठगि गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाउनु लाजमर्दो कुरा हो । व्यवसायीले कानुनी दायरमा रहेर सरकारबाटै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर कामदारलाई विदेश पठारहेका छन् । व्यवसायीले कामदारलाई कहाँ र कसरी ठग्यो भनेर खोजी गर्ने काम त राज्यको हो । व्यवसायीले राज्य तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएका प्रमाण छैनन् ।
स्वदेशमा एउटा काम भनेर झुक्याएर अर्कै काम पठाउने गरेको आरोप छ नि ?
सवै व्यवसायीले राम्रो काम गर्छन् भने हुँदैन । कसैले नराम्रो पनि गरेका होलान तर व्यवसायीभन्दा सरकारले विदेशमा भएका कामदारको सुरक्षा लागि खटाएका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले विदेशमा भिसाको व्यापार गरेर बसिरहेका छन् । त्यस्ता मान्छेले पठाएका कामदार विदेशमा अलपत्र पर्छन् । व्यवसायीले पठाएको त सय जनामा फाटफुट एक÷दुईजना परे पनि तत्काल उद्धार गर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट कतिको सहयोग छ ?
यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गरेका राम्रा कामको वास्ता गर्दैनन् । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार परिवारिक कारण स्वदेश फर्कियो भने पनि व्यावसायीले नराम्रो काममा पठाएर फर्किएको भनेर दोष लगाउने गरेका छन् । यहाँ कामदारको पक्षमा काम गर्ने होइन, कामदारका नाममा डलरखेती गर्ने र कमाउने उद्देश्यका साथ खोलिएका संस्थाले कसरी निष्पक्ष काम गर्लान् ? धेरै स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाले नेपालको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा राजनीतिक गरिरहेका छन्् । यसमा सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ ।
यो क्षेत्रलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दक्ष भएर गयो भने राम्रो कमाउँछ र विदेशमा सिकेको सीप पनि स्वदेश फर्किएर प्रयोग गर्छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई सुधार्न प्रष्ट नीति बनाउनुप¥यो । त्यसपछि व्यवसाय त आफंूै सुधार हुन्छ । हामीले २० वर्षदेखि एउटै लयमा कामदारलाई रोजगारीमा पठाइरहेका छौं । अब समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ नयाँ गन्तव्य राष्ट्रको खोजी गरेर कामदार पठायो भने यो क्षेत्रमा सुधार हुन्छ ।
यो व्यवसायलाई व्यवस्थीत तरिकाले सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय विशुद वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको व्यवसाय हो । यसमा व्यवसायको ठुलो योगदान रहेको छ । नेपाली व्यवसायीले विदेशको श्रम बजारमा गएर नेपाली श्रमिक रोजगारको अवसर मिलाउने काम गर्दछन । नेपालीको श्रम विश्व बजारमा पुराउने योगदान पनि व्यवसायी कै छ । यो क्षेत्रलाई अब हामी व्यवसायी नयाँ रिजन र भिजन बनाएर व्यवस्थीत ठंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रका संरक्षा गर्ने दात्यिव पनि हामी व्यवसायी कै हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सुचित नभई रोजगारीमा जानु हुँदैन । राम्रो रोजगारी दिन्छु भएर कसैले फकायो भने अहिले गुगल इन्टरनेटबाट कम्पनी, काम र त्यहाँ जाँदा पाउने परिश्रमका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका बारेमा पनि राम्रो अध्ययन गरेरमात्र जानुपर्छ ।